चीनको लागि जासुसी गरेको भन्दै भारतले पक्राउ गरेका नेपालीको तस्वीर सार्वजनिक – Dainik Sangalo
चीनको लागि जासुसी गरेको भन्दै भारतले पक्राउ गरेका नेपालीको तस्वीर सार्वजनिक
September 19, 2020 264
काठमाडौं। दिल्ली पुलिसले चीनको लागि जासुसी गरेको र भारतको गोप्य सूचना चीनलाई दिएको आरोपमा पक्राउ गरेका एक नेपाली नागरिकसहित तीनै जनाको तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । समाचार एजेन्सी एसिया न्यूज इन्टरनेशनलले ट्वीटरमार्फत तीनै जनाको तस्वीर सार्वजनिक गरेको हो । शनिबार दिल्ली पुलिसले तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
यसअघि दिल्ली पुलिसले शुक्रबार एक स्वतन्त्र पत्रकार राजीव शर्मालाई पक्राउ गरेको बताएको थियो । पुलिसले शर्मासँग अत्यन्तै संवेदनशील दस्तावेज पाइएको जनाएको थियो । पुलिसले शनिबार यही केसमा एक नेपाली नागरिक र एक चिनियाँ महिलालाई पनि पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो ।
शुक्रबार बेलुका पुलिसले पितमपुरामा बस्ने पत्रकार राजीव शर्मालाई चीनको लागि जासुसी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको बताएको थियो । पुलिसले तीनै जना विरुद्ध आधिकारिक गोपनीयता सम्बन्धी कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको दिल्ली पुलिसको विशेष सेलका डिसीपी संजीव कुमार यादवले बताएका छन् ।
‘विशेष सेलले चीनको इन्टेलिजेन्सलाई संवेदनशील सूचना पुर्याइरहेका स्वतन्त्र पत्रकार राजीव शर्मालाई पक्राउ गरेको छ । एक चिनियाँ महिला र उनका नेपाली सहयोगीलाई उनी उनलाई ठूलो रकम दिएको पाइएपछि पक्राउ गरिएको छ । चिनियाँ इन्टेलिजेन्सले ती पत्रकारलाई ठूलो रकमको बदलामा संवेदनशील जानकारी दिनको लागि अटाएको थियो । ठूलो संख्यामा मोवाइल फोन, ल्यापटप र अन्य संवेदनशील सामग्रीहरु पनि बरामद भएको छ’ यादवले भने ।
दिल्ली पुलिसले आज दिउँसो साढे ३ बजे (नेपाली समय पौने ४ बजे) यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन राखेको छ । पुलिसका अनुसार शर्मा सेप्टेम्बर १४ मा संवेदनशील दस्तावेजको साथमा पक्राउ परेका थिए । शर्मालाई सेप्टेम्बर १५ मा अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । अदालतले उनलाई थप अनुसन्धानको लागि ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । उनले जमानतको लागि दिएको निवेदनमाथि सेप्टेम्बर २२ मा सुनुवाइ हुँदैछ । शर्माले यसअघि एक समाचार एजेन्सी र पंजाबबाट संचालिन एक अंग्रेजी दैनिकमा काम गरेका थिए ।
Prevआन्दोलनमा सर्वसाधारण घाइते भएको देखेपछि कुलमानले विज्ञप्ती मार्फत गरे यस्तो आग्रह
Nextरेललाई न कानुन न कर्मचारी, पुनः भारतमै लगेर राखिने….
‘रक्षामन्त्रीको कालापानी अवलोकन गर्न गएको कि तिर्थयात्रा गर्न ?’- गगन थापा
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल कार्तिक ०३ गते । सोमबार ।
आज २०७७ साउन ३२ गते आइतबारको राशिफल
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127503)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (97750)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (75239)
चितवनकी ३२ वर्षीया गितालाई बाघले लखेटेर लियो ज्यान, शोकमा परिवार
चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोईराला आमा बन्दै ?